स्क्रैफ-ट्यूब - सजिलो!
शौक, सुई कार्य
जो केहि पनि भन्छन्, र फैशन फिर्ता आउन को आदत छ। कसैलाई विश्वास छ कि स्कार्फ-ट्यूब एकदम नयाँ प्रवृत्ति हो। यद्यपि, 80 को दशकहरुका महिलाहरु त्यस्ता मौलिक उत्पादनमा छिमेका थिए, उनीहरूको कलमसँग जोडिएको थियो। र यो एक तथ्य होइन कि यो पनि एक नवीन थियो। कुनै आश्चर्य छ कि उनि भन्छन् कि नयाँ सिर्फ एक पुरानो भूल गए हो।
यस्तो दु: ख - बस एक अनिवार्य चीज। सुरू गर्न यो एक असामान्य स्टाइलिश र आकर्षक विषय हो। यो मुख्य परिधानको टोनमा वा यसको विपरीतमा monophonic वा रंग हुन सक्छ। त्यो उहाँ निश्चित रूपमा गर्न सक्दैन - यो सुस्त र उबालो छ।
स्कार्फ-पाइप, जुन लगभग कुनै थ्रेडबाट जडित हुन सक्छ, सफलतापूर्वक दुवै सुन्दर कोट, र "यूनिसेक्स" र खेलकुदको शैलीमा जैकेट पूरा गर्नेछ। बिजुलीको मौसममा ज्वालामुखी र आरामदायक, यसले बर्फीली हावा र गीला बर्फलाई रोक्दछ, र अन्य समयमा यो तपाईंको कंधेमा प्रभावकारी कलर संग आरामपूर्वक व्यवस्थित हुन सक्छ।
स्कार्फ-ट्यूब कुनै पनि कपडासँग जोडिएको छ। ऊ महिलाहरु द्वारा प्रशंसा गरिन्छ, पुरुषहरु लाई लगाउँछन्, र बच्चाहरु को लागि यो सिर्फ एक अपरिहार्य चीज हो। यो बाँधिएको छैन, वरिपरि लिपटे र गर्दनको छेउमा। यसको छोरो फाँट नगर्ने, त्यसैले बाटोमा नगर्नुहोस्। यसलाई राख्नुहोस् - र यो तयार छ। तपाईं एक हुड वा स्कार्फ जस्तै वा एक सानो छोटो पोंचको रूपमा लुगा लगाउन सक्नुहुन्छ, क्यान्सरमा निचोड गर्न सक्नुहुन्छ। सबैले तपाईंको प्राथमिकता र फंतासीहरूमा मात्र निर्भर गर्दछ।
यस्तो विशिष्ट स्फफ, वा स्नैड, जसलाई भनिन्छ, एक सजावटी भूमिका खेल्न सक्छ, एक स्टाइलिश र उज्ज्वल तत्व हुन सक्छ। यस अवस्थामा, बुनाईको लागि कुनै थ्रेड लिन, पतली पनि लिन अनुमति छ। उत्पादन एक सजिलो कपडाको साथ बनाइन्छ, ढाँचामा चिपचिपा हुन सक्छ।
खैर, यदि, सुन्दरताको बावजूद, उसले आफ्नो आधारभूत प्रकार्य प्रदर्शन गरिसकेको छ - तापनि, त्यसपछि थ्रेडहरू मोटो र ठूला व्यक्तिहरू भन्दा उच्च छन्। सामान्यतया, यो उत्पादनको लागि, यो सिफारिश गरिएको छ कि बुनाई ठूलो हुन्छ, जो को छोटो कडा छैन। धेरै राम्रो लग कोइल, शंकु, रबड ब्यान्ड, लहरहरु र ताम्बूहरु। हो, तपाइँ चाहानु भएका कुनै पनि ढाँचा राम्रो हुनेछ।
स्फूर्ति-स्ट्राइक एकसाथ अचम्म लाग्दो हुन्छ। तपाई यसलाई दुई प्रवक्ताहरूमा बोट गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यसपछि समाप्त हुन्छ, र तपाईं सीधा पाइपको साथ बुन सक्नुहुन्छ, केवल चार। एक शुरुआती कण्टरको लागि पनि जो बुनाईको रूपमा यस्तो कलाको आधारभूत मास्टर सुरू गर्न शुरु भएको छ , घोडा-पाइप निश्चित रूपमा काम गर्नेछ।
उत्पादनको चौडाई फरक हुन सक्छ, तर अधिक प्रायः यो लगभग 50 सेन्टीमिटर हुन्छ। फैशनेबल सुईको लम्बाइ पनि आफैले निर्धारण गर्दछ, तर सामान्यतया यसलाई चौडाई, 60 सेन्टिमिटर भन्दा बढी बनाइन्छ।
एक संकीर्ण स्कार्फ-ट्रम्पेट "दृढतापूर्ण" देख्नेछ, र यसबाट सुन्दर सुन्दरताले काम गर्न सम्भव छैन। आवश्यक आकारको आयत जोडिएको पछि, यो असंभव रूपमा सम्भवतः यसको किनारहरूलाई एकताबद्ध गर्न आवश्यक छ।
तपाईं टाइप टाइपरमा सिलाई गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईले मैन्युअल रूपले बुना भयो उत्पादनका लागि विशेष सिविनसँग गर्न सक्नुहुनेछ। परिपत्र बुनाई सुईहरूमा बुनाई एक सानो र अझ गाह्रो छ, तर त्यसो गर्दा तपाईंलाई जमिनहरूसँग परेशान गर्नुपर्दैन।
यो आधारभूत, सरल योजना हो। समाप्त उत्पादन ब्रश र फ्रिङसँग सजाय हुन सक्छ, बन्डलहरू वा पातहरूद्वारा अलग रूपमा जोडिएको। ठूलो संभोग, विभिन्न आकारका स्पिट्स, विभिन्न रङ्गहरूको संयोजनले चीजलाई बढाउनेछ र यसलाई अरूको विपरीत बनाउनेछ। यस्तो शानदार स्नूड ट्रांसफर्मर एक अपरिहार्य चीज र तपाईंको अलमारी को सजावट हुनेछ।
कसरी आफ्नै द्वारा अंडरवियर सिलाई गर्ने?
तपाईंको हातले कसरी रेड राइडिङ हूड कास्ट्रेस बनाउने
नयाँ जन्मेको लागि सजिलो बुनाई: सुई र पन्जा बुनाई साथ टोपी
एक छाती संग स्कर्ट को पैटर्न। शैलीको विशेषताहरू
फायरबर्ड सुत्न एक केटीको लागि आफ्नै हातले: ढाँचा, सामग्री, निर्देशन
जहाँ अन्तस्करणले एक मानव हो र शरीर आफ्नो महत्त्व
स्वाइन फ्लू: लक्षणहरू र मानिसहरूमा संकेतहरू
Prostatitis र प्रोस्टेट adenoma संग व्यायाम। prostatitis संग अभ्यास को सेट
पीडीएफ-कागजात कसरी सम्पादन गर्न: कार्यक्रम समीक्षा
एक पेडीक्योर लागि विचार: निर्देशन कार्यान्वयन
खनिज पानी "लिपेट्स्क पंप कोठा": समीक्षा
शब्द को अर्थ "अस्थायी"। पर्यायवाची, विलोम र उदाहरण
Correctional काम: आफ्नो आवेदन र गणना
सम्पत्ति कम्पनीहरु को जफत
कसरी नवजात खुवाउने पछि hiccups रोक्न?
सोडियम हीड्राकसीड: सूत्र, गुण र आवेदन
एक घर मा मानसिक रोगको चिकित्सक कल गर्दा एक आवश्यकता हुन्छ